सहकारी बैंक कावासोती शाखाद्वारा उत्कृष्ट कारोबार गर्ने दुई सहकारी पुरस्कृत
काठमाडौ, मंसिर १५ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले नवलपुरका दुई सहकारी संस्थाहरुलाई पुरस्कृत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा उत्कृष्ट कारोबार गर्ने र नियमित कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई सोमवार एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कृत गरिएको हो । बैंकको कावासोती शाखामा उत्कृष्ट कारोबार गर्ने अमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नियमित...
काठमाडौ, मंसिर १५ । सानिमा बंैकले ग्राहकहरुका लागि“अनलाइन आवेदन दिनुहोस्, निःशुल्क क्रेडिट कार्ड पाउनुहोस्” नारा सहित निःशुल्क क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैकका अनुसार यो योजना १५ मंसिर देखि २२ मंसिर २०७७ सम्म अनलाइनबाट क्रेडिट कार्डको आवेदन दिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुका लागि लागू हुनेछ । अनलाइन आवेदन...
राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा तनहुँका दुई सहकारी पुरस्कृत
काठमाडौं, मंसिर १५ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले तनहुँका दुई सहकारी संस्थाहरुलाई पुरस्कृत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा उत्कृष्ट कारोबार गर्ने र नियमित कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई आइतवार एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कृत गरिएको हो । बैंकको दमौली शाखामा उत्कृष्ट कारोबार गर्ने रोयल सहकारी संस्था लिमिटेड दुलेगौडा र नियमित...
साकुरा सेभिङ्ग को–अपरेटिभ १३औं साधारण सभाः आर्थिक बर्षमा ५३ लाख ८८ हजार नाफा
काठमाडौं । काठमाडौंको चावहिल, चुच्चेपाटी प्रधान कार्यालय रहेको साकुरा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडले मिति २०७७ साल मंसिर १३ गते शनिवारका दिन स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाइ भच्र्युल माध्यमबाट आफ्नो १३ औं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । संस्थाको उक्त साधारणसभामा संस्थाका अध्यक्ष श्री सानुमैया श्रेष्ठले...
काठमाडौ, मंसिर १४ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले आफ्ना संस्थागत ग्राहकहरुका लागि बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने गरी ‘कर्पोरेट–पे’ प्रणालीको सुरुवात गर्ने भएको छ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली तथा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले यस...
राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब १३ करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले ९१ दिनको अवधिको लागि ३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । ९१ दिनको अवधिको ट्रेजरी बिल २०७७ साल फागुन १८ गते परिपक्क हुनेछ । उक्त ट्रेजरी बिल सोमबार बोलकबोल भएर मंगलबार बिक्री हुने बैंकले जनाएको छ । ...
यस्ता छन् प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्तावहरुः
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कायम चुक्तापुँजी २ अर्ब २५ करोड ८९ लाख ३१ हजार ७९७ रुपैयाँको कुल १५ प्रतिशतले हुन आउने ३३ करोड ८८ लाख ३९ हजार ७७० रुपैयाँबराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित...
काठमाडौ, मंसिर १४ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आज आईतबारबाट बाँके जिल्लाको कोहलपुरमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । नयाँ शाखा संचालनमा आए लगतै बैंकको शाखा संजाल ११४ पुगेको छ । ग्राहकहरुको सेवामा थ पविस्तार गर्ने उद्देश्यले बाँके जिल्लाको कोहलपुरबाट बैकिङ्ग सेवासुरु गरेको हो । सबै क्षेत्रसम्म बैकिङ्ग सेवाविस्तार गर्ने...
काठमाडौ, मंसिर १४ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बलियो नेपाल न्यूट्रिशन ईनिशियटिवलाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गर्नको लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । सहयोग अन्तर्गत बर्दिया, कपिलबस्तु र नवलपरासी पश्चिमका क्षेत्रका विजयपुर, पालिनन्दन, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका बालबालिकालाई ६० दिनसम्म...
माछापुच्छ्रे बैंकको स्थगित वार्षिक साधारणसभा पुस २ गते हुने
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको स्थगित २२ औँ वार्षिक साधारणसभा आउँदो पुस २ गतेलाई डाकिएको छ। बैंक सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभाको मिति पुनः तय गरेको हो। सभा पोखराको होटल पोखरा ग्रान्डमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत हुनेछ। यसअघि गत असोज १४ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गत कात्तिक ६ गते वार्षिक...
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ। बोर्डले हिजो बिहीबार यो कम्पनीलाई ६० लाख कित्ता सेयर आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो। अब कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६० करोड रुपैयाँबराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले निष्कासन गर्ने आईपीओ कुल चुक्तापुँजीको...
कास्की । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले शुक्रबार कास्की जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय परिसरमा नयाँ एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख एस.पी. प्रभू प्रसाद ढकाल र कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एस.पी. जीवन कुमार श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टरको उद्घाटन गरेका...
सन्राइजमा खाता खोल्न अझै सजिलो, अनलाइनबाटै तुरुन्तै सन्राइज स्र्माट बचत खाता खोल्न सकिने
काठमाडौं, मंसिर १२ । “स्मार्ट बनौं, डिजिटल बैंकिङ्ग गरौ अभियान अगाडी बढाउदै आएको सन्राइज बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रिथक र प्रविधिमैत्री सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । यसै अनुरुप बैंकले ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट सन्राइज बैंकमा तुरुन्तै बचत खाता खोल्न सकिने गरी “सन्राइज स्र्माट बचत खाता”...
नेपाल एसबिआई बैंकद्धारा बिद्युुतीय उपकरण सहयोग
नेपाल एसबिआई बैंकलेले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अनारमनी, विर्तामोडस्तिथ परोपकार तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक विधतीय उपकरणहरु प्रदान गरेको छ । बिसंं २०६७ सालमा संचालन भएको उक्त संस्थाले हाल ३८ जना बृद्धबृद्धाहरुलाई आश्रय दिएको छ । संस्थामा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध...
मुक्तिनाथ विकास बैंकको अनलाइन कर्जा आवेदन सेवा सुरु
मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्राहकहरुको समयको महत्वलाई ध्यानमा राखि र कोरोना (कोभिड १९) को महामारीको विषम परिस्थितीमा डिजिटल प्रणालीको प्रोत्साहन गर्ने गरी अनलाइन कर्जा आवेदन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने क्रममा बैंकले आप्mनो वेबसाइटबाट सिधै विभिन्न कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने साथै कर्जा स्वीकृतिका लागी...